Ka bax codka - El Centro de la Raza
Waxaan halkaan ku dhajineynaa codbixinteena, u doodisteena iyo ololaheena siyaasadeed ee ugu dambeeyay.
Ma iska diiwaangashan tahay inaad ka codeyso Washington? Ogaanshaha waa sahlan tahay. Tag VoteWA.gov si aad u aragto heerka diiwaangelinta codbixiyaha. Haddii aanad isu diwaan gashanayn inaad codayso, waxaad iska diiwaan gelin kartaa adiga oo isticmaalaya isku xidhkayada gaarka ah ee VoteWA halkan:
Isbaanish - https://olvr.votewa.gov/default.aspx?Org=ECDLR&language=es
Ingiriisi - https://olvr.votewa.gov/default.aspx?Org=ECDLR
Shiinees - https://olvr.votewa.gov/default.aspx?Org=ECDLR&language=zh
Fiitnaamiis - https://olvr.votewa.gov/default.aspx?Org=ECDLR&language=vi
Kuuriyaan - https://olvr.votewa.gov/default.aspx?Org=ECDLR&language=ko
Saxiix halkan si aan u helno eNewsletter -ka billaha ah si aan ula socono arrimaha aan wax ka qabaneyno heer degaan, gobol iyo heer qaran.
Isdiiwaangeli si aad u codeyso, xog ogaal u ahaato oo u codee maalin kasta oo doorasho ah! Eeg liiska waqtiyada doorashada ee muhiimka ah ee Degmada King iyo Gobolka Washington ee www.kingcounty.gov/elections.
Si aad iskaa wax u qabso ugu caawiso diwaan galinta codbixiyayaasha ama samaynta wacyigalinta waxbarashada codbixiyayaasha, fadlan kala xidhiidh xidhiidhiyahayaga tabaruca ah ee mgardner@elcentrodelaraza.org ama (206) 957-4602.